Guddiga Difaaca Baalamanka Somalia Oo La Kulmay Askar La Ruqseeyey Oo Debadbaxay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Gudigga difaaca ee baarlamanka Soomaaliya ayaa maanta qaabilay qaar kamid ah Saraakiil iyo askar ciidan oo horey uga tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, kuwaasi oo dhawaan uu Taliska ciidanka xooggu uu sheegey in shaqada laga ruqseeyey.
Boqolaal ka tirsan askartan ayaa ka hor inta aysan la kulmin guddiga difaaca u qaabilsan baarlamaanka waxey debadbax ku dhigeen taallada Sayida oo ka horjeedda dhismaha golaha Shacabka.
Askartan oo isugu jiray saraakiil ciidan, dabley, alifle iyo labo alifle ayaa ka cabanayey tallaabadii looga eryay shaqada ciidamada, waxeyna markii dambe ay hor fariisteen ilinka hore ee laga galo Madaxtooyada.
Askartan oo qaarkood xirnaa darajada ciidanimada ayaa waxay ku eedeeyeen Taliyaha ciidanka xooga dalka Jen, Dahir Khaliif Cilmi (Indhow Qarshe) inuu ku xadgudbay, isla markaana uu been ka sheegay, iyagoo gudanayay waajibaadkooda.
Askarta qaar oo ku jiray haween ayaa ku eedeeyay Taliyaha ciidamada inuu dayacay noloshooda, isla markaana ay halis u yihiin in Al-Shabaab ay ugaarsadaan sida ay tiri haween ka mid ahaa askartii banaan baxayay ee la ruqseeyay.
Kulanka guddiga difaaca ee baarlaamkanku la yeeshay askartaan oo lagu qabtay xarunta Golaha Shacabka, islamarkaana uu shir guddoominayay Guddoomiyaha gudigga Difaaca ee baarlamaanka Xildhibaan Xuseen Carab Ciise waxa ay warbixinno ku aadan sida shaqada looga ruqseeyay ka dhageysteen saraakiishii iyo askartii kulanka ka qeyb galay.
Qaar ka mid ah saraakiishii shaqada laga ruqseeyay oo kulanka ka hadlay ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen sida shaqada looga eryay, iyagoo sheegay in askarta qaarkood ay ku dhaawacmeen difaacidda dalka, haatanna ay ka midyihiin ciidanka shaqada laga joojiyay.
Guddoomiyaha gudiga Difaaca ee baarlaamanka Soomaaliya Xuseen Carab Ciise ayaa sheegay in waxyaabaha ay kulankooga kaga hadleen ay ugu muhiimsantahay dhageysiga cabasho ay u soo gudbiyeen saraakiil iyo askar shaqada laga ruqseeyay, waxaana uu intaa ku daray in waxyaabaha kulankooda ka soo baxay baarlamaanka la wadaagi doonaan, inkasta oo ay xildhibaannada ku maqanyihiin fasax.
“Waxaan rabnaa in aan arintaasi aan baarlamanka la wadaagno, tira koobka saxda ah meelkasta oo ay joogaan ciidankana waan u baahannahay, marka arrintan baaritaan ayaa sameneynaa annagoo warbixino ka dhageysanayno Taliska ciidanka Xoogga dalka, oo aan ka ogaaneyno sababaha dhabta ah ee ciidamadaasi lagu ruqseeyay” ayuu hadalkiisa ku daray.
Dhinaca kale, Naafada ciidamadii hore ee xooga dalka ayaa iyana banaan bax ka hor dhigay afaafka hore ee Madaxtooyada, waxaana ay aad uga cabanayeen in raashinkii iyo mushaarkii ay ka heli jireen dowladda Soomaaliya laga jaray.
Taliyaha Ciidamada xooga dalka Jen. Dahir Indho-Qarshe ayaa dhawaan ku dhawaaqay in shaqada laga ruqseeyay ilaa 700 askari oo ka tirsanaa ciidaka xooga dalka, kuwaasoo diiday iney waajibaadkooda gutaan sida uu yiyi.